အသေးစား ကားဖုန်စုပ်စက် - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Home Ads အသေးစား ကားဖုန်စုပ်စက်
Maung Pauk at 7:40:00 AM Ads,
အချိန်သိပ်မရလို့ ကားရေဆေးဆိုင်ကို သွားဖို့အဆင်မပြေတဲ့သူတွေ၊ ခရီးမကြာခဏထွက်တတ်ပြီး ကားရေဆေးခုံတင်ဖို့နဲ့ အတွင်းခန်းသန့်ရှင်းရေး လုပ်ဖို့ အဆင်မပြေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ အသေးစား ကားဖုန်စုပ်စက်လေး ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်..
စီးကရက် မီးညှိပေါက်မှာထိုးပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.. ကားထဲမှာရှိတဲ့ ဖုန်တွေ၊ အမှိုက်တွေကို ပြောင်စင်အောင် စုပ်ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူသလို ပစ္စည်းအတွက် နေရာလည်း အကျယ်ကြီးမလိုပါဘူး..
ကားထိုင်ခုံတွေ၊ ကြမ်းခင်ချောင်ချိုချောင်ကြားထိ ဝင်ရောက်ပြီး ဖုန်တွေ စုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်.. ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး စွမ်းဆောင်မြင့်တဲ့ ဖုန်စုပ်စက်လေးပါ...
ဈေးနှုန်းက ၁၂၀၀၀ ကျပ်သာ ရှိပြီး 09451689031. 09787179972 ကိုဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ...
အခြိနျသိပျမရလို့ ကားရဆေေးဆိုငျကို သှားဖို့အဆငျမပွတေဲ့သူတှေ၊ ခရီးမကွာခဏထှကျတတျပွီး ကားရဆေေးခုံတငျဖို့နဲ့ အတှငျးခနျးသနျ့ရှငျးရေး လုပျဖို့ အဆငျမပွတေဲ့သူတှအေနနေဲ့ အသေးစား ကားဖုနျစုပျစကျလေး ဆောငျထားသငျ့ပါတယျ..
စီးကရကျ မီးညှိပေါကျမှာထိုးပွီး အသုံးပွုနိုငျပါတယျ.. ကားထဲမှာရှိတဲ့ ဖုနျတှေ၊ အမှိုကျတှကေို ပွောငျစငျအောငျ စုပျထုတျပေးနိုငျပွီး အသုံးပွုရလှယျကူသလို ပစ်စညျးအတှကျ နရောလညျး အကယျြကွီးမလိုပါဘူး.. ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သယျဆောငျရလှယျကူပွီး စှမျးဆောငျမွငျ့တဲ့ ဖုနျစုပျစကျလေးပါ...
စြေးနှုနျးက ၁၂၀၀၀ ကပျြသာ ရှိပွီး 09451689031. 09787179972 ကိုဆကျသှယျဝယျယူနိုငျပါပွီ...